आज डिसेम्बर २२, वर्षकै सबैभन्दा छोटो दिन र लामो रात ! – US Nepal News
आज डिसेम्बर २२, वर्षकै सबैभन्दा छोटो दिन र लामो रात !
- यूस नेपाल न्युज संवाददाता प्रकाशित मिति: December 21, 2019
काठमाडौं, ६ पुस । आज वर्षकै छोटो दिन, प्रत्यक वर्षको डिसेम्बर महिनाको २२ तारिख वर्षकै छोटो दिन हुने गर्दछ । आज थोरै समयमात्र घाम लाग्ने भएकाले दिन छोटो र रात लामो हुने गर्छ । भाेलिदेखि क्रमस: दिन लामो र रात छोटा हुँदै जाने भए पनि यसको महसुस हुन भने केही समय लाग्ने ज्योतिषशास्त्रीहरु बताउँछन् । सबै ग्रहले आ–आफ्नै समयअनुसारले सौर्य मण्डलको परिक्रमा गरिरहेका हुन्छन् । यसैलाई आधार मानेर चलनचल्तीका दिन र गतेहरु गनिन्छ ।
आज बिहान ६ बजेर ५१ मिनेटमा झुल्किएको घाम भरे बेलुका ५ बजेर १४ मिनेटमा अस्ताउने मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । शनिबार बिहान ६ बजेर ५० मिनेटमा झुल्किएको घाम बेलुका ५ बजेर १३ मिनेटमा अस्ताएको थियो ।
पृथ्वीको उत्तरी खण्डमा सबैभन्दा छोटो दिन आज परेको हो भने दक्षिणी खण्डमा आज वर्षको सबैभन्दा लामो दिन र रात छोटो हुने गर्छ । डिसेम्बर २०, २१ वा २३ मा दिन छोटो र रात लामो हुने गर्छ भने जुन २१, २२ र २३ मा दिन लामो र रात छोटो हुने गर्छ ।
यूस नेपाल न्युज संवाददाता	 March 8, 2022
यूस नेपाल न्युज संवाददाता	 March 6, 2022
महासचिव भएपछि प्रियंकाको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रममा
यूस नेपाल न्युज	 February 11, 2019
कम्युनिस्टको कुनै धर्म हुँदैन धर्म बचाउन कांग्रेसलाई भोट :-प्रधानमन्त्री देउवा
यूस नेपाल न्युज	 November 11, 2017
पोखरामा मान्छे निल्ने नाली : कयौंको ज्यान लिइसक्यो नालीले
यूस नेपाल न्युज	 October 23, 2017